Shantaan Waxyaabood Waligaa Ha U Sameyn Gabadha Uu Xiriirka Kaala Dhexeeyo - Aayaha
Dhib malahan jeceylka aad lamaantaada u qabto inta uu la egyahay, waxaa jira waxyaabo ay qasab tahay inaad iska ilaaliso si aad uga farxiso.
Raganimadaada , waxaad heysaa mas’uuliyadda inaad farxad siisid xaaskaaga balse waa inay noqotaa mid xadidan si aysan uga faa;ideysan jaceylka aad u qabtid.
Marnaba naag ha usameynin shantaan waxyaabood.
1- Ka bixin qarashka iskuulka
Waligaa xaaskaaga ama saaxiibtaa haka bixin lacagta waxbarashada inkastoo ay wanaagsantahay inaad caawisid oo aad taageertid xilliyada ay iskuul dhiganeyso balse inaad wax walbo ka bixid waa qalad weyn, haddii aad dareentid inay ku qasbeyso ha u qaadan inay waligeed ku cafin doonto si kastaba dadka way isbedelaan waxaa macquulo ah inay jeclaato qof kale adigoo dadaal walbo ku bixinya wax walbana u sameynaya.
2- Dambi ka galid
Haddii aad joogteyn karto arrimaha nolosheeda ha sameynin waxyaabo doqonnimo ah si aad uga farxisid, haddii ay si dhab ah kuu jeceshahay wey fahmi doontaa markii aad niyad jabsantahay ama uu xaalku kugu xunyahay mana kugu cadaadi doonto arrimo dhaqaale.
3- Ha uga tanaasulin baahidaada si aad iyada u dharjisid
Waxaa macquul ahayn inaad lacag cunno ay ku gadato aad iyada u dirtid adiga oo xaalku kugu xunyahay oo baahan waad qeybsan kartaan waxa yarka ah ee aad heysid balse marnaba ha siin waxa dhan si aad uga farxisid.
4- Iska illoow riyooyinkaagii iyo hamigaagii
Kahor inta aanad iyada la kulmin xasuuso waxaad lahayd hami iyo riyooyin marnaba haka tanaasulin inaad ka gun gaartid maxaa yeelay ma jeclo waxa aad sameysid haddii aad dooneysay inaad waxbarasho aad dibedda u aadid waxa ugu dambeeya ee aad dooneysid inaad bedeshid waa maskaxda maxaa yeelay ma aha mid raaxo u leh iyada haddii aysan dooneyn inay ku sugto marnaba ha ujoojin inaad ka guul gaartid riyooyinkaaga si aad iyada uga farxisid.
5- Ha xushmad dareyn qoyskaaga
Haweenka waa ay farsamo badanyihiin gaar ahaan markii ay ogaadaan inaad si dhab ah u jeceshahay oo aad wax walbo u sameyneysid si aad u heysatid ama aysan kaaga tagin waxayna qaar kamid ah hawweenkaas isku dayayaan inay kaa dhaadhiciyaan in qoyskaaga ay xunyihiin marka ha u ogolaan taas haddii ay kaa tagto dadka kaliya eek u garab istaagaya waa qoyskaaga sidaa darted marnaba xiriirka ha ujarin si aad uga farxisid iyada.
Previous articleMuuqaal: “Gabdho uurka ku sida ilmo aan aabe lahayn ayaan hoteellada xeebta Liido ka arurinaa habeenkii”
Next articleUGAAR AH DUMARKA: Ninka Sida Dhabta Ah Kuu Jecel Marnaba Ma Sameynaayo 7-daan Waxyaabood
Aayaha editor - March 2, 2019 0
Waxaa jira rag badan oo wanaagsan oo mustaqbal doon ah isla markaana haweenkooda ka caawiya dhinacyo badan. Waxaan idiin soo gudbineynaa 6 calaamadood oo aad...
Shimbir looga shakiyey basaasnimo oo xabsi la dhigay (Sheeko Yaab Leh)
Nin huradada ka toosay isagoo ay ka go’antahay xubinta taranka (Sheeko...
Gabaryahay haddii uu ninku leeyahay Sifooyinkaan ka carar, yuusan waqtiga kaa...
6 Arrimood Oo Nin Kasta Uu Jecelyahay In Gacalisadiisa Ay Yeelato
Daawo: Mid Kamid Ah Fanaaniinta Ugu Caansan Somalia Oo Fanka Isaga...
Saddex Siyaabood Oo Jacayl Loogu Muujiyo Xaaskaaga Uurka Leh